Mahery Fo Roa Tratry ny Fanafihana Tamin’ny Asidra, Eny ambony Fandrian’ny Hopitaly No Manàla Fanadinana · Global Voices teny Malagasy
Mahery Fo Roa Tratry ny Fanafihana Tamin'ny Asidra, Eny ambony Fandrian'ny Hopitaly No Manàla Fanadinana
Voadika ny 08 Mey 2017 4:57 GMT
Hetsi-panoherana iray tamin'ny 24 Febroary 2015, nitakiana ny rariny ho an'i Sangita Magar sy Sima Basnet , ireo tratry ny fanafihana tamin'ny asidra ny Alahady talohan'io tao amin'ny sekolin-jazavavy ao Kathmandu, Nepal. Sary an'i Sunil Sharma. Fizakàmanana Demotix.
Ankizivavy roa mahery fo, mandry eo ampandriana efa ho iray volana izao noho ny fanafihana tamin'ny asidra, no mifaninana amim-pahavitrihana aminà mpianatra 574.685 hahazo ilay maripahaizana School Leaving Certificate (SLC) , fanadinana famaranan-taona atahorana indrindra nomena anarana hoe Iron Gate (varavaramby).
Ny 22 Febroary, nisy lehilahy iray tsy fantatra nanafika tamin'ny asidra an'i Seema Basnet sy Sangita Magar tao amin'ny ivontoerana iray fiofanana ao afovoan'i Kathmandu renivohitra. 26 andro taorian'ilay tranga, nambaran'ny polisy Nepaley tamin'ny 20 Martsa fa voasambotr'izy ireo i Jiwan BK ary voaheloka ho nitarika ilay fanafihana.
Seema, iray amin'ireo ankizivavy, dia nanoratra taratasy misy pejy efatra ho an'ny Praiminisitra Sushil Koirala nangataka taminy hamela azy hiatrika ny fanadinany any amin'ny hopitaly.
Niharan'ny fanafihana tamin'ny asidra, hiatrika fanadinana SLC eny ambony farafaran'ny hopitaly
Novalian'ny Praiminisitra tamin'ny fanomezana baiko ny Ministeran'ny Fanabeazana izany, mba hanao fandaminana hahafahana manao ilay fanadinana eny am-parafaran'ny hopitaly.
Raha nanoratra samirery ny taratasiny voalohany i Seema, avy any amin'ny hopitaly Bir nisy azy, i Sangita kosa niatrika fanadinana niaraka tamin'ny fanampian'ny mpikarakara iray tao amin'ny hopitaly Kathmandu Medical College (KMC).
Manoratra ny taratasiny voalohany amin'ny fanadinana SLC i Seema, ilay tratry ny fanafihana tamin'ny asidra, avy ao amin'ny hopitaly Bir, ny Alakamisy teo. Hamanta Shrestha
Miaraka amin'ny mpikarakara iray avy amin'ny K.M.C Hospital, miatrika fanadinana SLC i Sangita Magar ilay niharan'ny fanafihana tamin'ny asidra
Nisy hatezerana be tao Kathmandu taorian'ilay fanafihana tamin'ny asidra nanjo ireo ankizivavy.
Ilay Nepaley bilaogera isan'ny sangany dia nandefa sary avy amin'ireo fihetsiketsehana nanoherana ilay herisetra.
Ho fanoherana ilay fanafihana tamin'ny asidra niseho vao haingana! Mitranga amin'izao fotoana izao aty Basantapur #Kathmandu
Nanjary nitombo hatrany hatrany ireo olona mampiakatra ny fenony mitaky ny anovàna ny lalàna sy hampitomboana ny sazy satria tsy misy sazy henjana miandry ny mpanao ilay heloka. 2.000 ropia Napaley (eo amin'ny 20 dolara amerikàna) ary fampidirana am-ponja efatra volana no sazy ambony indrindra ao anatin'ny lalàna misy amin'izao fotoana izao.
Ankit Koirala, profesora mpanampy amin'ny taranja toekarena ara-pambolena ao amin'ny Anjerimanontolon'i Fambolena sy ny Ala ao Rampur, nibitsika hoe:
Tsy azontsika atao ve ny manova ny lalàna sy manasazy ireo meloka? #AtsaharoNyTsimatimanota
Nangatahan'ny olona ihany ko any haha-maimaimpoana ny fikarakarana atao an'ireo ankizivavy roa.
Amin'ny fanaovana sarinteny momba ireo vola lany ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ho aminà olana kely tsy manjary, Ram Kumari Jhakri, mpikambana ao amin'ny komity foiben'ny Antokon'ny Vondrompiarahamonina ao Nepal – Marksista sy Leninista Mitambatra, nibitsika hoe :
Angidimby fito no nasidina ho entina mihaona aminà olonkendry iray, saingy raha toa ity fitondrana ity tsy mikarakara ankizivavy iray tratry ny toraka asidra nataonà mpanao heloka bevava, miomàna – hanomboka ny isa miverina, hifarana ny isa.
Noho i Seema sy ny fahasahiany, taorian'ny naharaisana ny taratasiny mahavaky fo, avy hatrany ny praiminisitra dia nangataka tamin'ireo tomponandraikitra voakasik'izany mba hanome fikarakaràna maimaimpoana ho an'ireo ankizivavy roa.
Nibitsika ny fomba fahitàny ny herimpon'ireo ankizivavy taorian'ilay fanafihana i Bhabasagar Ghimire, mpanao gazety :
Na iza na iza nampitahotra [ahy] hoe ‘varavaramby’ ny SLC, ilai[ko] ny mihaona amin'izy ireny sy miteny aminy, fa efa nolanjaiko sy namidiko tamin'ny mpivarotra fatin-korotamby izay varavarana izay. Ankehitriny, aza miteny izany [amiko].
Poatsatroka ho an'ireo ankizivavy be herimpo ireo, izay nivonona ny hiroso sy ho tafitra amin'ny fiainana ary tsy nitanondrika na teo aza ny herisetra nanjo azy ireo.